Masuul Ka Tirsan Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya Oo Xafiis Ka Furanaaya Caasimadda Hargaysa |
Masuul Ka Tirsan Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya Oo Xafiis Ka Furanaaya Caasimadda Hargaysa
Hargeysa(GNN):-Masuul lagu magacaabo Cabdi Baaruud oo ka tirsan wasaarada arimaha dibada somaliya kuna magacaaban gudoomiyaha jaaliyada somaliyeed ee wadamada dibada ayaa qorshaynaya inuu xafiis ka furto magaalada Hargeysa.
Masuulkan ka tirsan wasaarada arimaha dibada dalka Somaliya ayaa dhawr goor oo is xig xigta yimid dalka, waxaanu markii ugu danbaysay ka qayb galay carwadii bandhiga buugaagta ee ka dhacday magaalada Hargeysa.
Xukuumada somaliland ee hogaaminayo madaxweyne Siilaanyo ayaan wax talaabo ah ka qaadin masuulkan ka tirsan wasaarada arimaha dibada somaliya ee dhawrka goor ee is xig xigta yimid wadanka somaliland.
Masuulkan lagu magacaabo Cabdi Baaruud ayaa aad loogu tilmaamaa inuu si weyn uga soo hor jeedo qadiyada madax banaanida somaliland, isaga oo inta badan wadamada ay xidhidhka la leedahay wasaarada uu ka hawl galaa ka codsada inaan marna la aqoonsan somaliland.
Masuulkan oo hada ku sugan magaalada Muqdisho ayaa la filayaa inuu maalmaha soo socda ka soo dego Madaarka Hargeysa isagoo markuu yimaadana la sheegay inuu kulamo kala duwan la qaato xubno ka mid ah golaha wasiirada xukuumada somaliland.
Masuulkan Lala Xidhiidhiyey inuu u ololeeyo Mabda,a Somaliwayn ayaa Imaanshihiisa Hargeysa ay Salka ku Haysaa Xidhiidh ay Leeyihiin, wasiiro ka tirsan xukuumada iyadoo xiliyo kala duwana uu safaro ku yimid somaliland waxaana la tilmaamaa inuu kalsooni iyo Isku Halayn uu ka Haysto Madaxtooyada somaliland waxaanay Arintani ku soo Beegmaysaa iyadoo Xiligan uu Jiro Loolan Salka Ku Haya Dhinaca Awood Qaybsiga Xisbiga Kulmiye, kaas oo u dhaxeeya masuuliyiin ka tirsan xukuumada.